आमाबाबु बन्नुहोस् - मायालु जोडे रहनुहोस् | साझेदारी | डाउनलोडको लागि निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
प्राय: जुनून विरुद्ध प्लानमा सेक्स
बच्चा जोडेको जन्मले जीवनको नयाँ, रोमाञ्चक अवधि सुरु गर्छ। तर एकै समयमा, दुईका लागि शान्त समय अन्त्य हुन्छ। विशेष गरी पहिलो बच्चाको साथमा पहिलो महिना चम्किलो रातहरु र रोजगारीको जीवन बच्चा सँगै ल्याउने धेरै नयाँ चुनौतिहरु को लागी विशेषताहरु हुन्।
आमाबाबु र साझेदारहरू - जब घडीहरू बच्चाहरूसँग परिवर्तन हुन्छन्
रोमान्स र कामुकताको लागि अक्सर प्रायः कम समय छ - र ठाउँ। यो भन्न छैन कि बालबालिका एक सम्बन्ध हत्यारा हो। तर तथ्य यो हो कि आमाबाबुले निर्दोष जोडीहरू भन्दा मायालु मायालु जीवन बिताउन कडा परिश्रम गर्नुपर्छ।
आमाबाबु हुनुहोस् र मायालु जोडे रहनुहोस्
निस्सन्देह, छोराछोरी जन्माउँदा प्राथमिकताहरू शिफ्ट हुन्छ, तर शारीरिक र भावनात्मक आवश्यकताहरू अचानक जन्मेका हुन्छन्। तिनीहरू केवल एक अधीनस्थ भूमिका खेल्छन्, तर चाँडै वा पछि, दुबै साथीहरूसँग लामो समयसम्मको लागि बढी समय हुन्छ।
आमाबाबुले पनि यौन आवश्यकताहरू छन्
एक परिवार मात्र होइन कला, तर मायालु जोडे रहनु मूलतया सिर्फ संगठनको कुरा हो।
सबैभन्दा पहिला, तपाईंलाई आफैलाई स्वीकार्नु पर्छ कि तपाईं केही चीज हराइरहेका छन् र तपाईंको पार्टनरसँग कुराकानीको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। हुन सक्छ त्यो या त्यो त्यहि हो र तिनीहरूले खुला ढोका चलाउँछन्। आखिर, आमाबाबुले शर्मिन्दा हुनुपर्दैन किनकि तिनीहरू शारीरिक निकटता चाहन्छन्। साथै, छोराछोरीले आमाबाबुलाई यौन जीवन पूरा गर्ने बेलामा फाइदा पुऱ्याउँछ किनभने यसले तिनीहरूलाई सुखी र अधिक आराम दिन्छ।
प्रेम, लम्बाई र हराएको बारेमा प्रेम कविता
एकैसाथ, तपाइँ त्यसोभए कि कसरी आफ्नो रोजमर्राको जीवनमा अधिक साथी खर्च गर्ने समयको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि तपाई दुवै तेरो twos मा यी क्षणहरूको माग गर्न चाहानुहुन्छ - तपाईका छोराछोरीहरू, र दाईको रूपमा कदम हुन सक्ने व्यक्तिबाट। त्यहाँ कुनै बहाना छैन!
जबसम्म तपाइँका छोराछोरी अझै जवान छन्, तपाईलाई विशेष रूपमा बिन्दुको प्रयोग गर्न र भाँडा साझेदारी गर्न प्रयोग गर्नु पर्छ। यो राम्रो तरिकाले काम गर्छ यदि विषय "बच्चाहरू" हटाइएको छ। यी क्षणहरूमा, यो मात्र तपाईं र तपाइँको साथीको बारेमा हुनुपर्छ। छोटो समयको लागि अन्य तनावपूर्ण विषयहरू पनि बदल्न प्रयास गर्नुहोस्: तपाईंले हप्ताको अर्को साँझको लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
जब तपाईंको बच्चा रातमा सुतिरहेको हुन्छ, त्यहाँ दाई भर्ना गर्न केहि गलत छैन। आफैलाई नियमित रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि एक महिना दुई पटक, घरबाट निस्कन निस्कने बच्चा। जब तपाइँ साथीहरूसँग भेट्नुहुन्छ, एक रोमांटिक भोजनको लागि बाहिर जानुहोस् वा सिनेमामा चलचित्र हेर्न पुरानो दिनमा जस्तै एक जोडीको रूपमा तपाईंको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ। सामान्य अनुभवहरू एकसाथ वेल्ड गर्नुहोस्।
जहाँसम्म यौन सम्बन्ध छ, धेरै जोडीहरू आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न अनिवार्य छन् जब बच्चाहरु अर्को ढोका सुत्छन्। यस अवस्थामा, तपाईसँग दुइवटा विकल्प छन्: या त तपाईं प्राय: प्राय: मौका पाउने निर्णय गर्ने निर्णय गर्नुहुँदा बच्चाहरु फुटबल वा बैले खेलिरहेका छन्।
आमाबाबु हुनुको अर्थ भौतिक निकटता को अर्थ छैन
अधिकतर युगलहरूले प्रत्येक अतिरिक्त मिनेटको लाभ उठाउन प्रयोग गर्दा अवसर उठाउँदछ। सबै पछि, असामान्यता पनि धेरै झन्डा हुन सक्छ। वा तपाईं रोमान्टिक भगवान् व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ र, उदाहरणका लागि, आफ्ना हजुरआमाका छोराछोरीहरूलाई बच्चाहरूको हेरचाह सोध्नुहोस्।
सेक्स को लागि एक नियुक्ति बनाउन को लागि तपाईं unromantisch खोज? हुनसक्छ, तर तपाईं लामो समयसम्म यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र वास्तवमा तपाइँको टाउको नि: शुल्क छ। आखिर, साँचो जुनून मात्र आउन सक्छ जब तपाईं र तपाईंको पार्टनरले दैनिक चिन्तालाई आराम र बिर्सन सक्दछ।
तर आफैलाई दबावमा राख्नुहोस् - सबै सम्भव छ, केही गर्न सकिएन। यो तपाईं र तपाईंको सम्बन्धलाई पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, बस एक साथ कुकुर र हँसिलो गर्न।
पृष्ठ प्रेमीहरू रङ
पुनःस्थापना गर्नुहोस् - पुरानो घर पुन: परिमार्जन गर्नुहोस्